Dr. Taleb Rifai antso maika ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO mamaly ny filankevitra mpanatanteraka amin'ny taratasy misokatra vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » WTN » Dr. Taleb Rifai antso maika ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO mamaly ny filankevitra mpanatanteraka amin'ny taratasy misokatra vaovao
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • WTN
Novambra 26, 2021
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha Dr. Taleb Rifai
Dr. Taleb Rifai, Sekretera jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany (UNWTO) teo aloha, dia mamaly ny Filohan'ny Filankevitra mpanatanteraka UNWTO androany mikasika ny latsa-bato miafina ho avy hanamafisana na tsia ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO ankehitriny.
The Komitin'ny World Tourism Network Advocacy Vao avy namoaka taratasy misokatra vaovao avy amin'ny Dr. Taleb Rifai, Sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha.
Valiny ity taratasy ity taratasy misokatra omaly ho an'ireo firenena mpikambana avy amin'ny Filohan'ny Filankevitra Mpanatanteraka UNWTO avy any Chile.
Ny taratasy dia mandrisika ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO mba hijery ny tohan-kevitra rehetra momba ity raharaha voasoritra ao amin'ny taratasiny ity.
Vakio ny taratasin'i Dr.Rifai
Ry mpiara-miasa sy namana malala,
Faly aho fa nahazo valiny tamin'ny taratasy niarahana nosoniaviko tamin'i Francesco Frangialli, mbola tamin'ny Desambra 2020, momba ny fotoanan'ny fifidianana ho sekretera jeneralin'ny UNWTO, ary misaotra ny Filohan'ny Filankevitra hajaina aho noho izany. Tsaroanao fa tao amin'ny taratasinay dia nanolotra soso-kevitra ny Sekretariat izahay mba handinika indray ny fotoana Janoary 2021 ho an'ny Filankevitra mpanatanteraka 113 taorian'ny fiovan'ny datin'ny FITUR nanomboka tamin'ny Janoary ka hatramin'ny Mey 2021.
Tsy azoko atao ny miarahaba sy mankasitraka ny teny nambaran'ny Hon. Filohan’ny Filankevitra fa notandremana tsara ny maha-ara-dalàna ny fanapahan-kevitry ny Filankevitra mpanatanteraka 112 sy 113. Mampionona ny fanomezany toky, na dia tsy nanohitra velively ny maha ara-dalàna ny fanapahan-kevitra rehetra izahay: ny fanehoan-kevitray dia natao tamin'ny fomba fijery midadasika kokoa mba hiantohana ny fahamarinan'ny dingana rehetra.
Tamin'ny Septambra 2020 tao amin'ny Filankevitra mpanatanteraka 112 tao Tbilisi, Georgia, dia nanapa-kevitra ny Filankevitra Mpanatanteraka mba hitazonana azy 113th fivoriana any Espaina tamin'ny Janoary 2021, ao anatin'ny rafitry ny FITUR, amin'ny daty hamafisin'ny firenena mpampiantrano 1.
Tamin’io fivoriana io ihany koa no nankatoavan’ny Filankevitra ny fe-potoana hanaovana ny zotram-pifidianana, miaraka amin’ny fe-potoana farany hanaterana ny firotsahan-kofidiana roa volana manomboka amin’ny datin’ny EC, izany hoe ny 18 novambra 2020, 2.
Iray volana taorian'ny fivorian'ny Filankevitra mpanatanteraka 112, tamin'ny Oktobra 2020, dia nanambara i Espaina fa nahemotra amin'ny May 2021 ny FITUR noho ny toe-javatra manjaka. Tamin'ny fanambarana an-gazety dia nekena ny fanatrehana ny fivorian'ny komity mpikarakara FITUR nataon'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Pololikashvili 3. Mampalahelo fa ny fanapahan-kevitry ny Filankevitra mitazona ny fivoriana 113 EC ao anatin'ny rafitry ny FITUR, amin'ny daty hamafisina, tsy narahina.
Taorian'ny fe-potoana farany ho an'ny fangatahana tamin'ny Novambra, UNWTO dia namoaka naoty am-bava ho an'ny mpikambana tamin'ny 23 Novambra tamin'ny fandraisana roa. mifanaraka tsara candidatures 4. Mampalahelo fa ny fepetra nankatoavina tao amin'ny 112 EC dia mampahafantatra ny mpikambana hatramin'ny 15 Desambra amin'ny nandray tsy nanaraka ny kandida. Ankoatra izay, hita ihany koa fa mampalahelo fa mahatratra enina ireo kandidà nolavina noho ny tsy nahafahany nanolotra izany feno hatramin’ny fe-potoana farany.
Tamin'izay fotoana izay, tamin'ny Desambra 2020, niaraka tamin'i Francesco Frangialli, dia nanoro hevitra ny vondron'ny UNWTO izahay mba handinika indray ny fotoanan'ny Filankevitry ny mpanatanteraka 113 5. Nampitandrina ihany koa izahay fa ny fitazonana izany amin'ny datin'ny Janoary dia hiteraka fandikana ny Fitsipika ara-bola 14.7 6 , toy ny nampalahelo.
Ny Filankevitra mpanatanteraka 113 dia natao araka ny nomanina voalohany tamin'ny 18 sy 19 janoary 2021, izay tsy nanana fotoana firy ny kandidà hafa raha oharina amin'ny mpifaninana amin'ny fampielezan-kevitra mahomby. Raha ny marina, tamin'ny hetsika ara-tsosialy nokarakarain'ny UNWTO tamin'ny ankabeazan'ny filan-kevitra, dia nilaza fa nampalahelo ny tsy nanatrika ny kandidà ho fanoherana ny tsy fahampian'ny fahafahana mitovy amin'ny fampielezan-kevitra.
Ry namako malala, tsy niady hevitra mihitsy aho fa tsy ara-dalàna ny fanapahan-kevitry ny Filankevitra. Araka ny voalazan'i Francesco Frangialli vao haingana, tsy ampy ny ara-dalàna. Amin'ny fanodinkodinana ny dingana, dia mety ho ara-dalàna sy maloto fitondran-tena ianao 7.
Eo amin’ny sehatry ny akademika no voalaza fa raha tsy mahomby ny mpianatra dia olan’ny mpianatra izany; fa raha tsy mahomby ny kilasy iray manontolo dia ny mpampianatra no diso. Inona no holazaina raha fohy loatra ny fe-potoana fangatahana ka hatramin’ny 6 amin’ireo kandidà 7 avy any ivelany no tsy voahaja ara-potoana? Na koa nahoana no tsy navela ho an'ny Mpikambana io vaovao momba ny filatsahan-kofidiana nolavina io, na dia nangataka fanazavana momba ny kandidà azo haparitaka?
Inona no tokony holazaina rehefa miatrika fe-potoana tsy azo ihodivirana amin'ny fampielezan-kevitra ny hany kandida sisa tavela, ny ankamaroany dia tamin'ny vanim-potoanan'ny Krismasy sy taom-baovao rehefa nikatona ny fitantanan'ny fizahantany nandritra ny taona?
Inona no holazaina rehefa nanatrika ny fivorian'ny komity mpikarakara FITUR izay niova daty nanomboka tamin'ny Janoary ka hatramin'ny Mey ny Sekretera jeneraly ary tsy nandray fepetra hanitsiana ny datin'ny Filankevitra ao anatin'ny rafitra FITUR araka ny nandidian’ny Filankevitra?
Inona no holazaina rehefa nandao ny datin'ny volana janoary ny Sekretera jeneraly noho ny fahafantarany fa handika ny Fitsipika ara-bola amin'ny fanaovana izany?
Inona no holazaina rehefa maneho ny tenany 8miaraka amin'ny Mpiandraikitra ny Etika mitombo ny ahiahy sy ny alahelo fa najanona tampoka ny fanao teo aloha mamela toerana malalaka ho an'ny opacity sy ny fitantanana tsy misy dikany?
Tao anatin'ny tatitra feno fahatakarana, nampitandrina ireo mpikambana ny Vondrona Iraisan'ny Fanaraha-maso ao amin'ny Firenena Mikambana 9 momba ny fifidianana Lehiben'ny Sampan-draharaha mpanatanteraka rehefa mandray anjara ny kandidà anatiny miady amin'io toerana io: Ireo kandidà anatiny mirotsaka ho filoha mpanatanteraka dia mety mampiasa amin'ny fomba tsy ara-dalàna na manampatra ny asany sy ny fananany (ohatra ny fifandraisana, ny dia, ny birao, ny mpiasa, sns.) mba hanatanterahana ny fampielezan-keviny manokana. Ity toe-javatra ity dia tsy hoe tsy araka ny etika fotsiny fa mety hiteraka fahafahana tsy mitovy eo amin'ny kandidà anatiny sy ivelany ary mety hitarika amin'ny fizarana mpiasa.
Ny Inspektera dia tena niahiahy momba izany mety hitranga izany, hoy izy ireo taty aoriana: Ny fitondran-tena toy izany, raha ny fijerin'ny Inspektera, dia tokony hoheverina ho tsy ara-dalàna sy tsy araka ny tokony ho izy, ary ho melohina. Raha misy kandidà anatiny na kandidà ivelany mahomby no ampangaina ho toy izany, dia tokony ho iharan'ny fanadihadiana sy ny dingan'ny fitsipi-pifehezana izy ireo..
Manoloana izany, ny Filankevitra mpanatanteraka 113 dia namoaka tolo-kevitra momba ny fifidianana ny sekretera jeneraly, izay eo anoloanareo. Fotoana izao ho anareo manoloana ny tohan-kevitra rehetra, sy ny hevitrareo momba ny kandidà, na handatsa-bato na handatsa-bato. Afaka manao izany ianao na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ary ny rafi-pifidianana dia tokony hiantoka ny tsiambaratelonao: Eo am-pelatananao ny hoavin'ny Fikambanana.
Miarahaba manokana anareo rehetra,
Sekretera jeneraly UNWTO
Fanampin'ny CE/112/6 rev 1. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE112_06_Procedure_SG_elections_2022-2025_rev1_En_0.pdf
Fehintsoratra faha-5 am.f.i./113/4. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_En_0.pdf
Fitsipika ara-bola 14.7: Amin'ny 30 Aprily isan-taona, ny Sekretera jeneraly dia manolotra amin'ny Filankevitra ny tatitra ara-bola nohamarinina tamin'ny taom-bola teo aloha. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422319
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2009_8_English.pdf nanonona ny fehintsoratra faha-77 sy faha-87 (fizarana).
Birgit Trauer dia nandefa tao amin'ny vondrona WhatsApp World Tourism Network:
Ity fiantsoana mangarahara sy fiahiana ara-moraly ity, raha ny fahitako azy, dia mampiseho finiavana sy fanoloran-tena faran'izay tsara mba hiantohana ny fampidirana, ny rariny, ary ny adidy ara-moraly izay fototry ny fifantohan'ny Firenena Mikambana amin'ny 2021 amin'ny fandriampahalemana sy ny fifampitokisana. Misaotra Dr. Taleb Rifai.